Indwangu Yezimpahla Zebhishi, Indwangu Yezemidlalo, Indwangu Yokugqoka Yangaphandle - Kuanyang
Ukulimala kweplanethi yethu okudalwe ukusetshenziswa kwepulasitiki ngokweqile akunakususwa
Ipulasitiki ingumkhiqizo wesikhathi sethu, ikakhulukazi olwandle. Izikhwama zepulasitiki namabhodlela e-PET ahlasele imvelo yomhlaba futhi asabalala emhlabeni wonke. Ngokwezibalo, cishe minyaka yonke kunezelwa olwandle amathani ayizigidi eziyi-9. Ukuphendula le nkinga, ukuyifaka kabusha esikhundleni se-polyester yendabuko (esebenzisa uwoyela omningi) yisixazululo esihle kakhulu semvelo.
I-Wuxi Kuanyang Textile Technology Co., Ltd. igxile ekuthuthukiseni nasekusebenziseni izindwangu zemidlalo zangaphandle nezangaphakathi. Eminyakeni yamuva nje, ngenxa yokukhathazeka kwamazwe omhlaba ukungcola kwepulasitiki, inkampani yethu iguqula izindwangu ezizinzile nezibuye zenziwe kabusha.Sizibophezele ekwakheni ukuthengwa kwemvelo kwemvelo nemikhiqizo esimeme. Njengamanje, inkampani yethu ithole isitifiketi se-GRS futhi yaba umphakeli wendwangu ovuselelekayo.
I-PRODUCT CATEGORY Bullet FABRIC ITEM NO KWB-2125 Uhlobo Lokuphakelayo Kwenziwe-Ku-Oda Izinto 95% Po ...
UMKHIQIZO WESIKHATHI Izingubo zezemidlalo FABRIC ITEM NO KW6402 Supply Type Make-to-Order Material 86% ...
I-PRODUCT CATEGORY Izingubo zezemidlalo FABRIC ITEM NO KW18-9040 Uhlobo Lokuphakelayo Lokwenza Izinto ...
UMKHIQIZO WOKUGCINA I-Yoga Wear FABRIC ITEM NO KW18-1077 Uhlobo Lokunikezela Lokwenza Izinto 8 ...
I-PRODUCT CATEGORY I-Swimsuit FABRIC ITEM NO KW-2182 Uhlobo Lokuphakelayo Lokwenza Izinto Ku-92% N ...
I-PRODUCT CATEGORY Izingubo zezemidlalo I-FABRIC ITEM NO KW-2182 Uhlobo Lokuphakelwa Kwenziwe Izinto Zoku-oda 88 ...
IMIKHIQIZO YOMKHIQIZO WAMABHAKATHI I-FABRIC ITEM NO KWS21-1021 Uhlobo Lokuphakelayo Lokwenza Izinto ...
UMKHIQIZO WESIKHATHI I-Yoga Wear FABRIC ITEM NO KWC21-4081 Uhlobo Lokunikezela Lokwenza Izinto ...
Isitolo esidayisa yonke impahla Sportswear Jacqua ...
UMKHIQIZO WOKUGCINA I-Yoga Wear FABRIC ITEM NO KWC21-4079 Uhlobo Lokunikezela Lokwenza Izinto ...
Ilungele ukufunda kabanzi
Akukho okungcono njengokubona umphumela wokugcina. Funda ngokuthola kwe-epilog
incwajana yamasampula wokuqopha i-laser. Futhi ngicele imininingwane engaphezulu
Chofoza ukuthola uphenyo
Funda ezinye izindaba
Buyela enkambisweni yombala wezemidlalo weqiniso ...
Ukuqonda ukufaneleka kwangaphakathi kwezemidlalo indus ...
Isudi yezemidlalo yabesilisa neyabesifazane ...
Ukwengeza okuthandwayo-ukuthambekela kwemininingwane ye-yoga ...
Ukuvikelwa kwemvelo ...